Somaliland: Shirka Badhan Halis Kuma Aha Qaranimadda Dalka - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Shirka Badhan Halis Kuma Aha Qaranimadda Dalka
Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay shirar beeleedyo la sheegay in ay maalmahan ka socdaan magaaladda Badhan ee gobolka Badhan, kuwaasi oo lagu sheegay in ay yihiin shirar ay beelaha degaankaasi aayahoodda kaga tashanayaan.
Wasiirul dawlaha wasaarada arrimaha gudaha Somaliland Mudane Maxamad Muuse Diiriye, oo shalay warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa sheegay in shirkaasi aanu wax dhibaato ah ku keenaynin qaranimadda Somaliland, isla markaanna uu la mid yahay shirarkii caadiga ah ee ay beeluhu qabsadaan.
Maxamed Muuse Diiriye, waxa uu tilmaamay in gobolka Badhan uu ka mid yahay Somaliland, dadka degaankaasina ay yihiin bulsho ku sifoday ilbaxnimo sidaas darteedna shirka ay magaaladda Badhan ku qabsanayaan ay u arkaan mid aan Somaliland waxba u yeelaynin.
Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Shirarka beeluhu way qab-sadaaan, oo wax mushkilad ah malaha. Reer Sanaag waa dad ilbax ah oo xadaariyiin ah gaar ahaan Sanaag bari, waana boqortooyo soo jireen ah, dadkaa maanta loogama baqi karo waxyeelada Somaliland-na. Markaa hawsha (shirka) magaaladda Badhan ka socota uma aragno mid Somaliland waxyeelaya, ciidan baana noo jooga Badhan, maamul baana noo jooga, shirkaasina Somaliland-na in uu wax waxyeelayo ilaa hadda ma heyno”.
Waxa kale oo uu ka hadlay wasiiru-dawlaha arrimaha gudaha sida ay gobolada bariga Somaliland doorashadda iyo diiwaangelintuba uga qabsoomi karaan. “Gobolada bariga Somaliland waa dalkeeni haddii ay Sool tahay iyo haddii ay Sanaag tahay-ba, doorashadu way ka qabsoomaysaa oo way ka dhacaysaa. Diiwaangelintuna way ka dhacaysaa, dadkuna waa dad u heelaan Somaliland”ayuu yidhi wasiiru-dawluhu.
Dhinaca kale Maxamed Muuse Diiriye, waxa uu ka hadlay ciidamo ka soo goostay maamul goboleedka Puntland oo isku soo dhiibay Somaliland. ciiddamadaasi oo soo gaadhay caasimadda Magaalada Hargeysa isla markaana kulamo ay kulamo la yeesheen talisyadda ciidamadda Booliska ee Somaliland. Wasiirul dawlaha arrimaha gudaha oo arrinta ciidamadda ka soo goostay Puntland waxa uu yidhi “Ciidankan soo goostay oo soo gaadhay Magaalada Hargeysa, waa ciidan ka soo goostay maamul goboleedka Puntland isla markaana diiday Puntland. Inaga (Somaliland) ciidan ku soo biira ciidankeena mooyee uma na qaano ciiadankeenii, inaga ciidan baa inoo jooga, musharkoodana qaata joogana Ilaa Taleex, inta ka shisheysa ee Garoowe agtiisana ciidan baa inoo jooga.
Markaa annagu ciidan aan weli ciidankeenna isu soo dhiibin uma naqaano ciidan laakiin kii ciidankeenna soo gaadha, ilayn in aynu qaadan iyo in kale is-weydiinbay leedahay, ciidankoo qoryahooda sita la odhan maayo waa ciidan laakiin ciidanku waa inuu qoryihiisa dhigaa, kadibna ciidan loo aqoonsadaa.”
Maxamed Muuse Diiriye
Somaliland: “Waad Maqleyseen In Dawladdu Oggolaatay Heshiiska Uu Hor-dhiciisu Hadda Bilaabmay, Mucdiisanna Hadda Ayaa La Geli Doonaa”
Kenya:Kenya’s terror pain – between a rock and a hard place
Somaliland: “36 Sanno Ka Hor Maanta Oo Kale Dhallinyarada Reer Somaliland Waxa Ay U Ahayd Maalin Madow” Madaxweyne Biixi
Somaliland: ” Anigu Hadii Aan Madaxweyne Ahaan Lahaa Saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon Waan Toogan Lahaa” Faysal Cali
Somaliland: Baaq Ku Socda Madaxweynaha La Doortay Iyo Xisbiyada Mucaaridka Ah